स्वास्थ्य Archives - Page 175 of 180 - Purbeli News
चाउचाउले निम्त्याउँछ यस्ता खतरनाक रोग
चाउचाउ नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय स्न्याक्समा पर्छ । छिटोछरितो र स्वादिलो हुने हुँदा हामी मध्ये धेरैले चाउचाउ खान रुचाउँछौँ । बच्चालाई मात्र होइन जवान र बृद्धहरुसम्म पनि चाउचाउ मन पराउँछन् । तर यही लोकप्रिय खाजा चाउचाउ स्वास्थ्यका लागि भने राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ । वुमन्स हेल्थमा प्रकाशित शोधका अनुसार चाउचाउको नियमित सेवनले हामीलाई व...
म्याग्दी १० चैत । एघार वर्षदेखि दमका कारण सास्ती खेपेका बेनी नगरपालिका–२ का खड्गबहादुर थापाको स्वास्थ्यमा एकाएक परिवर्तन आएको छ । रोगका कारण घरमै बसेर बित्ने उहाँको दिनचर्यामा पनि अहिले परिवर्तन आएको छ । उहाँ निर्धक्क गाउँमा हिँडडुल गरिरहेको भेटिनुहुन्छ । श्वासप्रश्वास प्रणालीमा उत्पन्न समस्याका कारण थलिएकी मङ्गलाघाटकी सुमित्रा पुन पनि रोगमुक्त हुन...
बुधबार, चैत्र ०९, २०७३
काठमाडौं, ९ चैत । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसै आर्थिक बर्षभित्रमा देशभरका सवै जिल्लामा पाठेघरको मुखमा हुने निःशुल्क क्यान्सरको परिक्षण (VIA Test Screening) सेवा सुरु गर्ने भएको छ । नेपालका अधिकांश महिलाहरुको मृत्युको मुख्य कारणको रुपमा रहेको पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर न्युनिकरणका लागि मन्त्रालयले देशभरी सेवा विस्तार गर्ने भएको हो । नुवाकोटको व...
काठमाडौँ, ९ चैत । ग्रामीण स्वास्थ्यको समग्र गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासमा उत्कृष्ट योगदान दिएबापत सन् २०१६ को निक साइमन्स पुरस्कार प्युठान जिल्ला, बरौला स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक बालगोपाल श्रेष्ठले प्राप्त गर्नुभएको छ । निक साइमन इन्स्टिच्युटद्वारा स्थापित सो पुरस्कार हरेक वर्ष देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये एक जनालाई प्रदान गरि...
असी प्रतिशतलाई हात्तीपाइलेकोे औषधि
भोजपुर, ९ चैत । भोजपुरमा ८० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई हात्तीपाइलेको औषधि खुवाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । यही चैत ५, ६ र ७ गते भोजपुर जिल्लाभरका ८० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई औषधि खुवाइएको हो । औषधि एकलाख ५० हजार चारसय ९५ जनालाई खुवाउने लक्ष्य राखिएको स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन विनोद मिश्रले जानकारी दिनुभयो । दुई नगरपालिका र सात गाउ...
अङ्कुर पलाएको (टुसा उम्रेको) अन्न या गेडागुडीमा प्रशस्तै पाइने पौष्टिक तत्वहरू हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको लागि अति नै फाइदाजनक हुन्छ। यसमा हुने फाइबरले गर्दा हाम्रो भोक पनि मेट्दछ भने शरीरलाई प्रशस्तै ऊर्जा पनि प्रदान गर्दछ। टुसा पलाएकोअन्नको स्वास्थ्य फाइदालाई मध्यनजर गर्ने हो भने अधिकांश रोग तथा समस्यालाई यसले सजिलै रोकथाम गर्न सक्दछ। ...
झापामा एकहजार १६५ जनामा हात्तीपाइले
झापा, ८ चैत । झापामा एक हजार १६५ जनामा हात्तीपाइलेको सङ्क्रमण रहेको पाइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका भेक्ट्रोल कन्ट्रोल अधिकृत वेदप्रकाश घिमिरेका अनुसार खुट्टा सुन्निएका २६५ जना, हात तथा स्तन सुन्निएका १०१ र ८०० अण्डकोष सुन्निएका हात्तीपाइलेका सङ्क्रिमत रहेका छन् । त्यस्तै, यस वर्ष सातलाख ३३ हजार नागरिकलाई यही चैत १७, १८ र १९ गते जि...
मानिसहरु मदिरासंग जे मिल्छ त्यही खाने गर्छन् । तर, कुन चिजले के असर गर्छ भन्ने थाहा नै पाउँदैनन् । जुन चिजलाई मदिरासंग कहिलै पनि खानु हुँदैन । – करिब आधाजस्तो मानिसहरुले मदिरासंग ममफली वा फ्राई गरेको काजु खाना खाने गर्छन् । तर, यसरी खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यलाई निकै असर पुर्याउने गर्छ । यसमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा धेरै हुने गर्छ । जसले भोक लाग्न दिँदैन...
कुन महिनामा जन्मने व्यक्तिलाई कस्तो रोग लाग्न सक्छ ? जान्नुहोस्
एजेन्सी । तपाईँलाई थाहा छ ? कतिपय रोगहरु जन्मने महिनाको कारणले पनि लाग्न सक्ने विभिन्न अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । कुनै व्यक्तिलाई धेरै जसो एउटै किसिमको रोग अथवा शारीरिक समस्याले पिरोलिरहेको हुन्छ। कसैलाई सँधै भरि टाउको दुख्ने, कसैलाई खोकी लागिरहने वा कसैलाई सानैदेखि हाड जोर्नीको दुखाइ हुने हुन्छ। यी सबै शारीरिक समस्याहरूको कारण वंशाणुगतको कारणले...
कास्कीमा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बृद्धि
पोखरा, ४ चैत । एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या कास्कीमा बढ्दै गएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको एचआइभी÷एड्स हेर्ने स्रोत व्यक्ति नानीबाबु ढकालकाअनुसार यसवर्ष जिल्लामा दुई हजार दुईसय एचआइभी सङ्क्रमित छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा एक हजार नौसय एचआइभी सङ्क्रमित थिए । सङ्क्रमितमध्ये नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको एआरटी औषधि ९८८ जनाले खाइरहेको स्रोत...